Install Myanmar Font Manually ~ Free Mobile Sharing
7:46 AM Android Tutorials, myanmar fonts5comments
By Aaron Nandus in Myanmar Mobile Forum
New Method for Myanmar Font Installation - Manually
ပုံတွေပါ ပါတဲ့ PDF အနေနဲ့ ဖတ်ချင်ရင် - ဒီမှာကြည့်ပါရန်
zinmaungmaung January 16, 2013 at 7:40 PM
အကိုတခုလောက်မေးပါရစေဗျာ၊S2ကို built No.XXLQ6 ကို root လုပ်တာ အဆင်မပြေလို့ ပါ။ အဲဒီ built Noနဲ့ကိုက်မဲ့ root software လေးအကို သိရင်ကူညီပါလားအကို။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်hareဗျာ။အကိုမှာရှိရင်လည်းshare ပေးပါလားခင်ဗျာ။zmsnail@gmail.com
အကို ကျနော့ HTC one ကအကိုပြောသလိုလုပ်တာ Save တော့ဖြစ်သွားပါတယ် ဒါပေမယ့် လေးထောင့်တုံးပဲတွေ့နေရတုန်းပဲ System ထဲက font မှာသွားကြည့်တာ စောစောက copy & paste လုပ်ထားတဲ့ zawgyione.ttf ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ အကို
သွပ်သွပ် March 16, 2014 at 5:55 AM
ဖောင့်သွင်းနည်းကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြထားတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အယင်က ဖုန်းတော်တော်များများကို မြန်မာဖောင့်သွင်းဖူးပါတယ်။ အကုန်လုံးနီးပါးအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီပို့(စ်)ကို မဖတ်ခင်ထိတော့ ဖုန်းထဲမှာ ဘယ်ဖိုင်တွေကို modify လုပ်သွားသလဲဆိုတာ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ခုတော့တော်တော်လေးနားလည်သွားပါတယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာ ကျွန်တော့်ညာဏ်နန့် လိုက်မမှီနိုင်တဲ့ ပြသနာနည်းနည်းရှိနေပါတယ်။ဦးလေးတစ်ယောက်မှာ တရုတ် တက်ဘလက် တလုံးဝယ်လာပြီးတော့ မြန်မာဖောင့်သွင်းခိုင်းပါတယ်။ Brand က ANDROID ပါ။ Android Version က 4.2.2 ပါ။ Root ထားပြီးပါပြီ။Zawgyi Changer အမျိုးမျိုးနှင့် ထည့်ကြည့်ပါတယ်။ Browser မှာ မြန်မာစာ ဖတ်လို့ ရိုက်လို့ ရပြီးတော့ system နှင့် facebook မှာ မြန်မာစာလုံးဝမမြင်ရပါဘူး ။။မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံး တခုမှမမြင်ရပါ။ ကွက်လပ်ကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်။ system font ထဲက roboto regular နှင့် Droidsans regular font တွေကိုလည်း Zawgyi နှင့် နာမည်ချိန်းပြီး Over Write လုပ်ထားပြီးပါပြီ၊fallback_fonts.xml နှင့် system fonts.xml တွေကိုလည်း Zawgyi နှင့် Over Write လုပ်ထားတဲ့ ဖောင့်တွေကို ကြော်ငြာထားပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မရသေးဘူး။ဘယ်လုပ်ရမယ် ဆိုတာ အကြံညာဏ်လေးပါဦး အကို။ ကျွန်တော့် အီးမေးလ်က rakhawuntha@gmail.com ပါ
Paing Thu July 25, 2016 at 9:46 PM
I want to see right Myanmar font in Smule. Now I'm using HTC 626 G+. How should I do. Please kindly teach me, bro. Thank you so much.
ZAW KHIN MAUNG August 8, 2016 at 6:26 AM